Ukuseta ishishini lokugaya irayisi ePhilippines
Ilayisi ibiyinto ephambili yokutya kwePhilippines ukusukela ngexesha lokukhumbula,Ukuseta ishishini lokugaya irayisi ePhilippines kunokuba yinto efanelekileyo.Ufuna ukwazi amanyathelo okuseta ishishini lokugaya irayisi ePhilippines.? Njengalo naluphi na olunye uhlobo lweshishini lokuvelisa ukutya okuziinkozo, zimbini iindlela zokwenza oku kwenzeke. Nokuba ungaqala ivenkile yokugaya irayisi ukuze uqhubekise ukulima kumlimi okanye wakhe isityalo sokugaya irayisi ukuze uthengise irayisi yakho emhlophe.Each ineziphelo kunye nezixhobo, ngoko ke kufuneka ukhethe iinketho zakho ngononophelo ngaphambi kokungena kolu hlobo lweshishini..
Xa kuthelekiswa nokwakha isityalo sokugaya irayisi ,kuya kuba lula kakhulu ukwakha umzi-mveliso wokugaya irayisi
1 Fumana indawo elungileyo
Ukukhetha indawo elungileyo sisiqalo esibaluleke kakhulu sokuvula ivenkile yokugaya irayisi
2.Fumana iilayisensi ezifanelekileyo kunye neemvume
Akunandaba nokuba loluphi uhlobo lweshishini , Ukufumana iilayisensi kunye neemvume zeshishini kubalulekile.
3.Thenga umatshini wokugaya irayisi
Isixhobo esikhulu kwivenkile yokugaya irayisi ngumatshini wokugaya irayisi.
Amashishini amancinci amancinci emaphandleni anakho ukuthatha kwakhona ukujonga kumatshini wokuchaphazela irayisi oxineneyo onokwenza imisebenzi yeemodeli ezinkulu.Lolu hlobo lungumfuziselo we-6LN15 ovela eTshayina .Sinye isizathu esihle sokuba ibe yinzuzo kukuba inqanaba lokuphinda lisebenze kwakhona 68.1 ipesenti. Oku kuthetha ukuba kuko konke 100 kilos zepaddy etyibilikisiweyo, 68.1 kilos zerayisi ehlaziyiweyo ziyafunyanwa.umatshini wokugaya irayisi unomatshini wokucoca ,khumbula umatshini, irayisi isahluli somatshini, umatshini wokugaya irayisi,umatshini wegrader yerayisi. Irayisi enamanzi icocekile kakhulu.unokusetyenzwa yindoda enye kuphela.
Umtyalomali unokufaka enye kuluntu apho amafama amancinci erayisi avelisa izixa ezikhulu eziyinkqubela phambili yokulungisa irayisi zingakhathaleli ukwamkela. abalimi abancinci beerayisi banokugcina isivuno sabo kwaye bathengise ngokufana nerayisi, baya kwandisa umvuzo. Abalimi abaninzi bavuna 120 imigca ye-palay kwihektare enye. Ukuba bayayithengisa palay nge-P17 ngekhilolitha nganye, Ingeniso epheleleyo iya kuba yi-P102,000. Kodwa ukuba ukuvuna kwabo kunyuswe yi-6LN15 paddy irayisi yesityalo, baya kufumana zizonke 3,900 kilos zerayisi ehlanjululweyo. Kuba irayisi yeyodidi oluphezulu, oya kuthengisa nge-P42 ngekhilog nganye kwaye ixabiso elipheleleyo liya kuba yi-P163,000. Ixabiso lokugaya yi-P7,800 kuphela ke ngoko kunyuka kwemali engenayo ye-P53,200 kumafama athe abambelela kumdiliya wawo aza athengisa ngokufanayo nerayisi yokuthengisa.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungayifumana njani imveliso yakho yerayisi yesiko yokuthengisa? Kunzima kakhulu ukuseka isityalo sokugaya irayisi kwiiPhilippines
1.Funda ngakumbi ngolwazi malunga neshishini lokugaya irayisi
Ngaphambi kokuba uthathe into yokushishina ngerayisi, kubalulekile ukuba ufumane nayiphi na ingqolowa yerayisi ekujikelezile; jonga okusingqongileyo, ube nemvakalelo yeenkqubo ezichaphazelekayo ekugayeni irayisi kwaye uhlangane nomnini okanye umphathi. Bazise ukuba ucwangcisa ukuqala ishishini kwaye uyakufuna ukululekwa. Kuya kufuneka ufumanise neendleko zokuqalisa ishishini kunye neendleko zokuqhuba ishishini emva kokuphehlelelwa. Khangela izixhobo zokusebenza kunye namandla. Fumanisa ngemingxunya kunye nemiceli mngeni ekunokungena abo baqalayo ukungena kushishino. Fumana indlela yokuphepha imigibe kwaye woyise imiceli mngeni.
2.Yenza isicwangciso seshishini
Ukuphuhlisa isicwangciso seshishini lakho lokugaya irayisi kubaluleke kakhulu, njengoko iya kukukhokela kwinkqubo yokuqalisa ishishini ngempumelelo kwaye iqhuba ngokufanelekileyo emva kwayo. Isicwangciso seshishini lakho siza kuza kulunga xa usondela kubatyali mali okanye kubabolekisi ukuze uxhase ishishini lakho. Isicwangciso seshishini lakho siya kuchaza iinjongo zeshishini lakho kunye neenjongo, ukuqala kokuqalisa kunye neendleko zokuqhuba, umvuzo ovunyiweyo kwiminyaka embalwa yokuqala, abasebenzi abafunekayo, imakethi yakho ekujoliswe kuyo kunye nohlalutyo oluqinisekileyo lwentengiso, ukhuphiswano, isicwangciso sakho sokuthengisa kunye nenqaku lokuthengisa elikhethekileyo, kunye nesicwangciso sakho sokuphuma.sinyathelo elibalulekileyo lokuseka ishishini lokugaya irayisi ePhilippines.
3.Fumana iilayisensi ezifanelekileyo kunye neemvume
Phantse kuwo onke amazwe ehlabathi, Ukufumana amaphepha-mvume kunye nemvume yeshishini iyimfuneko ekuqaliseni naliphi na ishishini. Nangona kunjalo, iilayisensi ezifunekayo kunye neemvume ziyahluka phakathi kwamazwe kunye namazwe.Ngoko kungcono undwendwela iarhente efanelekileyo kwilizwe lakho okanye kwilizwe lakho ukubuza malunga namaphepha mvume kunye neziqinisekiso oya kuzifumana ngaphambi kokuba uqale ishishini lokugaya irayisi.. Ngcono nangoku, ndwendwela iwebhusayithi yearhente okanye nxibelelana nommeli onamava ukuze ufumanise.
4.Fumana indawo elungileyo
Indawo elungileyo iyi-germane kwimpumelelo yalo naliphi na ishishini. Indawo eyona ndawo efanelekileyo yokushishina ngerayisi yenye yeendawo ezihlanganisana ngokulula kwiilori nakwezinye iimoto, kuba ezi ziya kusetyenziselwa ukuthutha irayisi ukuya nokubuya kwimayile yakho.Ngokongeza, xa ukhetha indawo yeshishini lokugaya irayisi, Kuya kufuneka ubonise ukubakho kombane kunye nezinye izinto oya kuzifuna ekusebenzeni kwemihla ngemihla kwishishini lakho.
Esona sixhobo siphambili kwishishini lokugaya irayisi sisityalo sokugaya irayisi. Lo matshini ucocekile de-husks irayisi ekrwada ukuvelisa irayisi ngohlobo oluhlelwayo.Isixhobo sokugaya irayisi ungawangenisa sisuka kumazwe afana neTshayina., apho oomatshini bahlala benziwa kwaye bethengiswa ngamaxabiso ancitshisiweyo.
6.Qesha abasebenzi kwaye uqale imisebenzi
Uya kudinga ukuqesha abanye abantu ukuze basebenze nawe. Umzekelo, Uya kudinga abasebenzi abaya kuthi bakhuphele irayisi eluhlaza kunye nabasebenzi bezityalo ezirayisi, kuxhomekeke kubungakanani boomatshini kwisityalo sakho sokugaya irayisi.
Nxibelelana nathi Ngokuseka ishishini lokugaya irayisi ePhilippines